Wararka - Waxyaabaha Saameynta Ku Leh Daalka Daalka Waxyaabaha Tubaakada Birta Birta ah oo aan Xad lahayn
Waxyaabaha Saameynta Ku Leh Awoodda Daalka Waxyaabaha Tuubbada Birta ah ee birta ah
Awoodda daalka ee walxaha tuubbada birta ah ee birta ah ee Shandong Derunying ayaa aad ugu nugul arrimo kala duwan oo dibedda iyo gudaha ah, taas oo arrimaha dibedda ka mid ah ay yihiin qaab, cabir, dusha sare ee dusha sare, iyo xaaladda adeegga ama waxyaabaha la midka ah qaybaha, arrimaha gudahana waxaa ka mid ah halabuurka, cufnaanta, daahirnimo, walbahaar haraaga ah iyo wixii lamid ah laftiisa. Isbeddelada qarsoon ee arrimahan ayaa sababi doona isbeddello ama xitaa farqi weyn oo u dhexeeya waxqabadka daalka.
Saamaynta arrimaha ku saabsan xoogga daalku waa arrin muhiim ah oo ka mid ah baaritaanka daalka. Cilmi-baaristani waxay waxtar u yeelan doontaa qaabeynta qaab-dhismeedyada habboon, xulashada qalabka tuubbada birta birta ah ee saxda ah iyo sameynta farsamooyin kala duwan oo qabow iyo farsamooyinka kulul, taas oo markaa hubinaysa waxqabadka daalka sare ee qaybaha.
1. Saameynta diirada diiqadda
Caadi ahaan, awoodda daalka waxaa lagu helaa cabbiraadda iyadoo la adeegsanayo muunad siman oo la sharraxay. Si kastaba ha noqotee, heerar kala duwan, sida tillaabooyinka, dariiqyada muhiimka ah, fiilooyinka, iyo godadka saliidda iwm., Waxaa hubaal ah inay ka jiraan qaybo farsamo oo dhab ah. Jiritaanka heerarkan waxay keeneysaa isku-buuqsanaanta culeyska fekerka, taas oo ka dhigeysa culeyska ugu badan ee dhabta ah ee asalka u ah buundada oo aad uga weyn culeyska magac-u-yaalka ah ee qeybta uu xambaarsanyahay, waxayna badanaa bilowdaa daalidda qaybta.
Isugeynta isku dheelitirka culeyska feker ahaaneed ee Kt: waa saamiga ugu badan ee culeyska dhabta ee dhabta ah ee walbahaarka magacaaban ee asalka u ah buundada la helay iyadoo loo eegayo aragtida laastikada ee ku hoos jirta xaaladaha laastikada ku habboon.
Isku-darka isku-buufinta cadaadiska wax-ku-oolka ah (ama isku-darka isku-buufinta cadaadiska daalka) Kf: saamiga xadka daalka σ-1 ee muunad siman illaa xadka daalka σ-1n ee muunad darajo ah.
Isku-dheelitirka isku-dheelitirka culeyska fekerka ee saameynta leh ma aha oo kaliya cabirka iyo qaabka uu ka kooban yahay, laakiin sidoo kale saamaynta ay ku leedahay astaamaha maaddada, farsamaynta, kuleylka iyo arrimo kale.
Isugeynta isku dheelitirka culeyska fekerka ee wax ku oolka ah waxay ku kordheysaa culeyska darajada, laakiin badiyaa way ka yartahay isugeynta isku dheelitirka culeyska fekerka.
Isku-darka isku-darka xasaasiga ah ee daalka q: isku-darka isku-darka dareenka daciifka ahi wuxuu muujinayaa xasaasiyadda maaddadu ku leedahay heerka daalka waxaana lagu xisaabiyaa qaaciddada soo socota.
Baaxadda xogta q waa 0-1, ta yarna waa q, ka xasaasi yar ayaa ah walxaha tuubbada birta aan xaddidneyn ee ku jira darajada. Tijaabooyinku waxay muujinayaan in q uusan ahayn mid si joogto ah wax u taagan, welina uu la xiriiro cabirka darajada; q asal ahaan lama xidhiidho qaan-gaadhka oo keliya marka gacan-ku-qaadku ka weynaado qiime cayiman, qiimaha gacanku wuu ka duwan yahay maaddooyinka kala duwan ama xaaladda wax lagu socodsiiyo.
2. Saamaynta cabirka
Sababtoo ah kaladuwanaanta jirka iyo cilladaha gudaha ee maaddada, kororka cabbirka ayaa weyneynaya suurtagalnimada cillad la'aan, taas oo yareynaysa xadka daalka ee maaddada. Jiritaanka saameynta cabirka ayaa ah arin muhiim ah oo lagu dabaqayo xogta daalka ee laga helay cabirka muunada yar ee shaybaarka qeybta cabirka dhabta ah. Suuragal ma ahan in gebi ahaanba iyo si la mid ah loo matalo isku-buuqa culeyska fekerka, walbahaarka walbahaarka ama wixii la mid ah ee ku saabsan cabirka dhabta ah, sidaa darteed natiijooyinka shaybaarka iyo daalka daal ee qaybo gaar ah qaarkood ayaa kala go'ay midba midka kale.
3. Saamaynta xaaladda ka shaqaynta dusha sare
Calaamadaha makiinada aan sinnayn ayaa had iyo jeer ka jira dusha mashiinka. Calaamadahaani waxay u dhigmaan qanjirro yaryar oo sababa isku-buuqa culeyska dusha sare ee maaddada, waxayna yareyn doonaan awoodda daalka ee maaddada. Tijaabooyinku waxay muujinayaan in, aluminiumka aluminium iyo aluminium, xadka daalka ee mashiinka xun (rogista qallafsan) uu ka hooseeyo kan nadiifinta ganaaxa dheer ee 10% -20% ama ka badan. Ka sarreeya waa xoogga maaddada, sida ugu xasaasisan ayay u tahay dusha sare.